Wararka Maanta: Talaado, May 15, 2012-Madaxtooyada Somalia oo la duqeeyay iyo Iska-horimaadyo ka dhacay degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir
Mas'uuliyadda weerarrada lagu qaaday saldhig ay ciidamada dowladda KMG ah ku leeyihiin agagaarka caymiska Qaranka oo ku yaalla degmada Yaaqshiid iyo saldhig kale oo ay ciidamad dowladdu ku leeyihiin agagaarka garoonka kubadda cagta ee Muqdisho oo ku yaalla degmada Wardhiigley ayaa waxaa sheegatay Al-shabaab.
Sidoo kale, Al-shabaab waxay sheegatay mas'uuliyadda weerarka madaafiicda ah ee lagu qaaday madaxtooyada, iyadoo aan la ogeyn khasaaraha nafeed ee ka dhashay weerarrada iyo duqeynta.
"Madaafiic culus ayaa xalay noo gudbay dhinaca madaxtooyada, qiyaastii waxay ahaayeen illaa shan madfac, waxaana nagu soo daatay firira madaafiicdaas kaddib markii qarxeen," ayuu yiri mid ka mid ah dadka daggan dhabarka madaxtooyada Soomaaliya oo la hadlay HOL.
Dowladda KMG ah ayaan ka hadlin duqeyntii madaxtooyada ku dhacday, iyadoo duqeynta lagu soo beegay xilli uu madaxweynaha Soomaaliya safar ku joogo dalka Mareykanka oo uu kaga qaybgalay shirka golaha ammaanka oo maanta furmaya.
Xarakada Al-shabaab ayaa sheegtay in weerarada ay ku qaaday saldhigyada ay ku suganayeen ciidamada dowladda KMG ah ee ku yaalla jidka warshadaha ay yihiin kuwo qayb ka ah howgallada ay kawadaan Muqdisho.
Dhanka kale, kooxo bastoolado ku hubeysan ayaa xalay ku toogtay ruux rayid ah degmada Hodan ee Muqdisho, kuwaasoo ay u suurogashay inay baxsadana, mana ahan markii ugu horreysay oo weerarro, dilal iyo duqeymo ay ka dhacaan xarunta Soomaaliya ee Muqdisho oo ay gacanta ku hayso dowladda KMG ah.